China Ugboro abụọ-Sided-PCB ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta ihe |Kaz
Iji ezigbo ọkpụrụkpụ ihe dị mkpamaka iwu FR4 PCBS.A na-atụ oke n'imesentimita asatọ, dị ka puku kwuru puku, sentimita, ma ọ bụ millimeters.Enwere ihe ole na ole ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọihe FR4 maka PCB gị.Atụmatụ ndị a ga-mee ka usoro nhọrọ gị dị mfe:
1. Họrọ ihe FR4 dị gịrịgịrị maka mgbidi ụlọ nwere ihe mgbochi ohere.Ihe ndị dị mkpa nwere ike ịkwado akụkụ dị iche iche dị mgbagwoju anya dị mkpa iji wuo ngwaọrụ ahụ, dị ka ngwa Bluetooth, njikọ USB, wdg. Ha dịkwa mma maka nnukwu ọrụ ebe ndị injinia chọrọ ilekwasị anya na atụmatụ nchekwa ohere.
2. ihe dị mkpa FR4 dị mma maka ngwa chọrọ mgbanwe.Dịka ọmụmaatụ, iji ihe ndị dị mkpa maka PCB ụgbọ ala na ahụike dị mma n'ihi na PCB ndị a
mkpa ka ehulata mgbe niile.
Zere ịhọrọ ihe ndị dị gịrịgịrị maka imewe PCB grooved, n'ihi na nke a na-abawanye ohere nke mmebi ma ọ bụ mgbawa bọọdụ sekit.
3. Ọkpụrụkpụ nke ihe ahụ nwere ike imetụta ịdị arọ nke bọọdụ sekit a na-ebipụta ma nwee ike imetụta ndakọrịta akụrụngwa.Nke a pụtara na ihe FR4 dị gịrịgịrị ga-eme ka ọ dị mfe imepụta bọọdụ sekit dị fechaa, nke na-eduga na ngwa elektrọnik dị fechaa.Ngwaahịa ndị a dị arọ na-adọrọ mmasị ma dị mfe ibufe.
Mgbe ịzere iji ihe FR4, ihe FR4 abụghị nhọrọ ziri ezi ma ọ bụrụ na ngwa gị chọrọ nke ọ bụla n'ime ihe ndị a: Nguzogide okpomọkụ dị mma: FR4 adịghị atụ aro ma ọ bụrụ na a ga-eji PCB na gburugburu ebe okpomọkụ dị elu.Dịka ọmụmaatụ, ihe FR4 abụghị ezigbo nhọrọ maka PCB na ngwa ikuku.
Mgbado ọkụ na-enweghị ndu: Ọ bụrụ na onye ahịa gị chọrọ PCB nke kwekọrọ na RoHS, a ga-ejirịrị ịgbado ọkụ na-enweghị ndu.N'oge ịre ahịa na-enweghị ndu, okpomọkụ reflux nwere ike iru 250 Celsius C, yana n'ihi nguzogide okpomọkụ ya dị ala, ihe FR4.
enweghị ike idi ya.
Mgbama ugboro dị elu: Mgbe ekpughere ya na mgbama ugboro dị elu, efere FR4 enweghị ike idowe mgbochi kwụsiri ike.N'ihi ya, mgbanwe na-eme ma nwee ike imetụta iguzosi ike n'ezi ihe nke mgbaàmà.
N'ihi ewu ewu ha na iji ya mee ihe, taa ọ dị mfe ịchọta ihe FR4 PCB na ahịa na nkọwa na ọrụ dịgasị iche iche.Nhọrọ bara ụba dị otú ahụ mgbe ụfọdụ na-eme nhọrọ siri ike.N'okwu a, ọ dị mkpa ka gị na onye nrụpụta kwurịta ihe ị chọrọ.
Nke gara aga: Ndepụta ọnụahịa maka Flex-Pcb-(Fpc) - Ihe-Pụrụiche-PCB - Kaz
Ngosipụta LED FR4 Imension Gold PCB Ebipụtara okirikiri...